Hab Fudud Oo Gacalisadaada Uga Dhigi Karto Boqoradda Haweenka Ee U Samee Habkaan - Arimaha Bulshada
Waxaa jira xaalado gaar ah oo aad xaaskaaga uga dhigi karto in ay tahay qof qaas ah,islamarkaana aad ku koolkoolin karto si aad u kasbato naxariisteeda.
Habka ugu wanaagsan ee aad ku tusi karto in ay tahay qof qaas ah, haweeney kasta waxa ay leedahay wax iyada ay ka hesho ama aaney ka helin,laakin waxaan kuu heynaa habab guud kaasoo qof walbo uu ku xamaasad gelin karo xaaska .
U sharax dareenkaaga : Wax dhib ah malahan sida aad u jeceshahay iyo taageerada aad u heyso haweeneyda aad jeceshahay hab qarsoon,laakin haween looma qancin karo in ka dheer si aanan loo cabirin.
Wadada ugu wanaagsan oo aad ugu caddeyn karto ayaa ah hadal ahaan ama waad u qori kartaa warqad yar oo gaaban oo jaceyl ah si aad u tusto jaceylkaaga.
Waxaa kale oo xitaa sawiran kartaa kaar islamarkaana waxaad ugu xardhi kartaa dareenkaaga ereyo qalbiga jilcin kara.
Sii waqti iyo arimo ay kula wadaagto :La wadaag waqti tayo leh gacalisadaada, haweenku waa ay jantaan in ay helaan dareenka aan kala qeybi karin,la qeybso xiisaheeda,dareensiina in xilli walbo aad farxad siin karto.
Qorsheey maalmaha nasashada :U kaxeey meel ay jeceshahay in ay aado, sii hawo uguna deeq in ay ilowdo howl maalmeedyadeedii maskaxda ka mashquuliyey,waa hanaanka aad uga dhigi karto qof qanacsan.
Xusuusnoow maalmaha muhiimka u ah:In aad Xusuusnaato sanadguurooyinka dhalashada gacalisadaada waxa ay ka dhigeysaa in ay dareento mid gaar ah,waxa ayna dareemeysaa in si gaar ah looga fekero oo la daneynayo.
La saaxiib qoyskeeda iyo asaxaabteeda:Hadii aad ka agdhawaato qoyskeeda iyo saaxiibada gacalisadaada waxaad ku kasban kartaa in ay si gaar ah kuu xushmeyso,maadaama aad u muujisay in aad tahay qof wax cad wata.
Noqo qof taageero ula garab taagan :Gacalisadaada,hilmaamsii maalmaha murugada iyo dhibaatooyinka,hana ku eedeyn culeysyada nolosheeda ku soo kordha.
Weydii in ay kaala qeyb qaadato soo jeedinteeda hababka shaqooyin la mid ah.
Rag badan ma jecla in ay gacmaha la galaan howlaha guriga amaba waa ay ka faanaan,marka ay arkaan nin xaaskiisa howlaha guriga la qabanaayana waa lagu caayaa,laakin aqriste Arimahabulshada.com waxa ay ku leedahay ma ogtahay in aad xaaskaaga ka garabsiiso mashquulka howlaha guriga in ay laga helo jaceyl badan iyo naxariis,
Haweenka aad ayey uga helaan ninka ay xiriirka leeyihiin marka uu sawirkeeda shaashada hore ee mobile-kiisa saaran tahay,waxa ayna siisaa ammaan,maadaama uusan cidna kala gambaneyn rabitaankeeda,islamarkaana waxaa ka dhalata kalsooni iyo ifafaalo wanaagsan, talaabadaas yarna waxa ay dhalisaa in ay dareento in ay muhiim tahay.